Asan-dahalo : ahilika any amin’ny « autorité locale » ny tsy fahombiazana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Asan-dahalo : ahilika any amin’ny « autorité locale » ny tsy fahombiazana
Tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny fitantananan-draharaha eto Madagasikara amin’izao fotoana. Sambany vao nisy fitokonana faobe fanairana ny mpitondra nataon’ny mpiasan’ny banky manerana ny Nosy. Raha ny antony voalza dia mba ho fampanenoana lakolosy mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay efa tonga eo an-tokonam-baravaran’ny banky amin’izao fotoana. Mitaraina arak’izany izy ireo fa miha-sarotra ny miaro ny fananan’ireo izay mametraka ny fitokisany amin’ny banky mba hitahiry ny volany. Ankoatra izay dia mbola mitohy ny tsy fandriam-pahalemana amin’ny faritra maro. Voalaza fa asan-dahalo izy ireny ary mitarika fifamonoan’ny mpiray tanindrazana. Ny tena zava-doza dia efa miha-mahazo laka indray ny tondro molotra amin’izao fotoana hany ka mety tsy manan-tsiny no iharan’ny hatezeram-bahoaka.
Ny faran’ny herinandro teo dia nisy ny fivoriana manokana nataon’ireo manana andraikitra mikasika ny filaminana. Tao Ambohitsorohitra no nanaovana izany ary Rajoelina no nitarika azy. Nahilika any amin’ireo tomponandraikim-panjakana isam-paritra ny olana. Nambaran’ireo niara-nivory fa tsy matoky ny « autorité locale » intsony ny vahoaka ka izany no mitarika ny fitsaram-bahoaka. Niaiky anefa ireto mpanara-dia ny mpanongam-panjakana ireto fa tsy misy ny fandriam-pahalemana. Mandritra izany fotoana izany dia mirehareha ry Lylison sy ny namany fa nahalavo dahalo 11 lahy nandritra ny fifandonana tamin’ny faran’ny herinandro teo. Hatreto aloha tsy misy afaka manaporofo fa tena dahalo tokoa ireo lavo ireo na tsia. Raha ilay ramatoa nolazaina fa Tokanono mantsy hatreto dia tsy nisy resaka intsony ny momba azy satria fantatry ny vahoaka fa fihetsiketsehana no betsaka fa raha ny vokatra dia aotra.